Tools အသုံးပြုပုံ – Kalay
ကိုယ်ဝန်ယူဖို့အတွက် ကြိုးစားနေသူလား ? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင်က ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားသူလား ? ဒါမှမဟုတ် သားသားမီးမီးလေးတွေ ကျန်းမာရေးအတွက် ပူပန်နေရတာလား ? ဒီလိုအချိန်တွေကို ဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုတာ မေမေတို့အတွက် အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေပါ။ မေမေတို့ ရဲ့ ခက်ခဲမှုတွေ၊ ကိုယ်တိုင်မသိသေးတဲ့ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေ အားလုံးအတွက် kalay.com.mm ရဲ့ Tool ကလမ်းညွှန်ပေးထားပါတယ်။ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ အပေါင်းလေးတွေတစ်ခုချင်း ထောက်ပြီးကြည့်သွားကြပါနော်။
Bread Feeding (နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်း)
Kalay.com.mm တွင်ကိုယ်ပိုင် အကောင့် မရှိပါက ပထမဦးစွာ register သွင်းပါ။
နို့ချိုတိုက်ကျွေးတဲ့အခါမှာ ကလေးက နို့ကိုငြင်းပယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိခင်အနေနဲ့ နို့တိုက်ကျွေး တဲ့အခါမှာ တစ်စုံတစ်ခု မအီမသာဖြစ်လာတဲ့အခါ Tools ထဲက Breast Feeding ကိုသွားလိုက်ပါ။
သင်ခံစားရတဲ့အတိုင်း Box အသေးလေး မှာ အမှန်ခြစ်လေးတွေ နှိပ်လိုက်ပါ။
အားလုံးပြီးဆုံးသွားပါက သင့်အနေနဲ့ ရလဒ် box လေးကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းအပေါ်ခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်သော ရလဒ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Hospital Bag Checklist (ဆေးရုံယူသွားရမည့် ပစ္စည်းစာရင်း)
သင်မွေးဖွားရန်အတွက် ဆေးရုံကို ယူဆောင်သွားရမယ့် ပစ္စည်းစာရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်း မြင်ရဖို့ နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ သိရှိနိုင်ဖို့ Tools ထဲက Hospital Bag Checklist ကိုသွားပါ။
သင်ဆေးရုံကို ယူသွားမည့် ပစ္စည်းစာရင်းများမကျန်အောင် စနစ်တကျနဲ့ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ ဆောင်းပါးကဖော်ပြပေးထားပါလိမ့်မယ်။
Pregnancy Diary (ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေ့စဉ်မှတ်တမ်း)
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတွေကို သိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက် Tools ထဲက Pregnancy Diary ထဲကိုသွားပါ။
သင့် ဆရာဝန်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ခန့်မှန်းမွေးရက်ကို နေ့ရက်ရွေးခြယ်ပေးခြင်း Box ထဲကို ထည့်သွင်းပြီး ရလဒ်ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ။
အခုဆိုရင် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပြောင်းလဲနေတဲ့ ရက်အလိုက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှတ်တမ်းကို ရိုးရှင်းစွာ သိနိုင်ပါပြီ။
Due Date Calculator (မွေးရက်တွက်ချက်ခြင်း)
သင် ခန့်မှန်းမွေးရက်ကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ တွက်ချက်ဖို့အတွက် Tools ထဲက Due Date Calculator ထဲကိုသွားပါ။
သင်နောက်ဆုံးရာသီလာချိန်ရဲ့ ပထမဆုံးရက်ကို Box လေးထဲမှာ ရေးထည့်ပါ။
ရက်တွက်ကြည့်မယ် ကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင်မျှော်မှန်းထားတဲ့ ရက်တွက်ချက်ခြင်းရလဒ်က ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။
မွေးရက်တွက်ချက်တဲ့ Tools ကခန့်မှန်းခြင်းဖြစ်တာကြောင့် တကယ့်မွေးဖွားမည့်ရက်နဲ့ အနည်းငယ်ကွာဟမှုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Ovulation Calculator (မမျိုးဥကြွေချိန် တွက်ချက်ခြင်း)
သင့်ရဲ့ မမျိုးဥကြွေချိန်ကို တွက်ချက်ပြီး ရလဒ်သိရှိချင်တယ်ဆိုရင် Tools ထဲက Ovulation Calculator ထဲကိုသွားပါ။
သင့်ရဲ့ ရာသီစက်ဝန်းနေ့ရက် အရေအတွက်ကို ပထမဦးစွာ ထည့်သွင်းပါ။
ရာသီစက်ဝန်းနောက်ဆုံးအခေါက်ရဲ့ ရှေ့ဆုံးရက်ကို ထပ်မံထည့်သွင်းရေးသားပြီး ရလဒ်ကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင်သိရှိချင်တဲ့ မမျိုးဥကြွေချိန်ကို သိရှိနိုင်ပါပြီ။
Naming Tool (ကလေးအမည်ရွေးခြင်း)
သင့်ကလေးရဲ့ အမည်ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဖို့ အတွက် Tools ထဲက Naming Tool ထဲကိုသွားပါ။
သင့်ကလေးရဲ့ နေ့အလိုက် အတွဲအဖက်ကောင်းမယ့် နာမည်လေးတွေကို ရွေးချယ်ဖို့အတွက် ဖော်ပြပေးထားတဲ့ နံတွေကို နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် နေ့နံနဲ့ကိုက်ညီမည့် နာမည်လေးတွေကို အစဉ်လိုက်ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
ကလေးရဲ့ နေ့နံအလိုက် သင့်စိတ်ကြိုက်နာမည်လေးတွေရွေးချယ်ပြီးပါက Get Name ဆိုတဲ့ Box လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ကဲဒါဆိုရင်တော့ သင့်ကလေးအတွက် သင့်စိတ်ကြိုက်နာမည်လေးကို Naming Tool လေးက ဖန်တီးပြီးပါပြီ။
Your Favourites (သင့်ရဲ့အကြိုက်တွေ)
Your Favourites ကတော့ ကိုယ်ဝန် စဆောင်မယ့် အကြင်လင်မယားကအစ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန် သားသားမီးမီးလေးတွေမွေးဖွားပြီးတဲ့ အချိန်ထိ တကယ့်ကို အသုံးဝင်စေမယ့် Tools လေးတစ်ခုပါ။ kalay.com.mm မှာရှိတဲ့ မေမေတို့ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးပုံလေးတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် အနှစ်သက်ဆုံးဆောင်းပါးလေးတွေကို လွယ်ကူစွာမှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။
အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားနေရာမှာ သင်အနှစ်သက်ဆုံး အမျိုးအစားတစ်ခုကိုရေးပြီးထည့်လိုက်ပါ။